DOWNLOAD Official Okwu Rikoooo July - Windows 7 - Rikoooo
Official Okwu Rikoooo July - Windows 7
Nke a isiokwu na-nnọọ ezu, ọ na-e mere maka niile Windows 7 nsụgharị, na ọ nwere a ngosi mmịfe na ụfọdụ meziri bụ 720p HD ma ọ bụ ọbụna Full HD 1080p, zọ ije na a kpam kpam n'usoro bụla 20 nkeji.
Nke a isiokwu na-agbanwe gị ụda maka mmalite na shutdown nke Windows, ị ga-enwe ike na-emeghe gị na kọmputa na-anụ ụtọ anụ ụda rụpụtara ụgbọelu na-apụ, na-emechi ụda nke a ụgbọelu ọdịda, na mgbe ị na ide isiokwu, ị nwere ike ọbụna nụrụ ụda a agafe kwekọrọ, na n'ikpeazụ mgbe ị tọgbọ chakoo na ahịhịa, ị ga-nụrụ ụda ụgbọelu okuku.
The isiokwu ga-agbanwe desktọọpụ akara ngosi, ahịhịa efu na zuru, njirimara gị na nchekwa, na netwọk icon, na dochie ha oyiyi nke isiokwu nke ụgbọelu. Akaụntụ gị picture nwekwara ike-anọchi ihe oyiyi na oyiyi nke Rikoooo (Nhọrọ).
Na ị ga-ọbụna nwere ihe nchekwa ihuenyo (nhọrọ), bụ nke nwere a ngosi mmịfe nke ndị mmeri nke gara aga hụ na i meziri. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ inupụ bigotry ọbụna n'ihu, i nwere ike ịgbanwe nbanye gị na ihuenyo (nhọrọ) họpụtara ndị Top Screen Kọntestị. The mfe version nke isiokwu a dere ihe slide ákwà na ezigbo oyiyi, ụda, ihe oyiyi, agba windows Windows 7.
The zuru version (na-atụ aro) nke a isiokwu e dere ihe slide ákwà na ezigbo oyiyi, ụda, ihe oyiyi, agba windows Windows 7, na nchekwa ihuenyo nwere a slide show nke mmeri nke gara aga hụ na i meziri, ihe oyiyi na akaụntụ na oyiyi nke Rikoooo, nbanye ihuenyo na TOP ihuenyo.
The isiokwu abịa na niile dị mkpa faịlụ na Nkuzi n'ihi na ya kwesịrị ekwesị ịrụ ọrụ, na Nkuzi ndị dị oké zuru ezu a ghọta ihe nzọụkwụ site nzọụkwụ na foto (Na french naanị).
Onye edemede: Pilotepro93
Ihe Mgbakwunye Na-emetụta Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ FSX & P3D & FS9 2.3
Isiokwu Rikoooo Windows 98 + January 2012
Isiokwu Rikoooo Summer 2012 Windows 7
Isiokwu Rikoooo Windows 7 December 2011
Isiokwu Rikoooo Summer 2012 Windows 98 +